Nhau - Nanjing inogadzirisa kubhadharisa uye kubhadharisa chiyero chemari yebasa, mota dzakachena dzemagetsi dzinosvika 1.68 yuan pa kWh
Nanjing inogadzirisa kubhadharisa uye kubhadharisa chiyero chemubhadharo webasa, mota dzakachena dzemagetsi dzinosvika 1.68 yuan pa kWh
Musi waChikunguru 9, iyo Nanjing Municipal Mutengo Bureau yakaburitsa iyo "ziviso yekugadzirisa iyo Maitiro Ekuchaja Ekuchaja uye Kutsiva kweMotokari Dzemagetsi Dzakachena". Chiziviso chakanyatsotaura kuti yakagadziridzwa yakachena magetsi bhazi (12m) kuchaja uye kutsiva yepamusoro-soro yekuchaja sevhisi, mota dzemagetsi dzakachena Iyo yepamusoro yekuchaja mwero wekuchaja masevhisi (manomwe kana pasi) ndeye 1.46 yuan pa kWh, 2.00 yuan pakiromita, uye 1,68 yuan pa kWh.
Mari yepamusoro yekutsiva mota dzemagetsi (manomwe kana pasi) haina kugadziridzwa, uye ichiri 0,68 yuan pamakiromita.
Chiziviso chaicho chiri seinotevera:
Cherechedzo pamusoro pekugadzirisa iyo Charge Standard yekuchaja uye Yekutsiva Sevhisi yeMagetsi Magetsi Akachena
Mutengo Bureau yedunhu rega rega, yemusika inotarisisa Bureau yeJiangbei Nyowani Dunhu Rekutungamira Komiti, uye zvivakwa nekushanda zvikamu zvechaji yega yega uye yekutsiva.
Zvinoenderana neshanduko yemutengo wezvigadzirwa zvemafuta zvakanatswa mukota yechipiri ya2018, zvinoenderana ne "Chiziviso cheProvince Mutengo Bureau paKusarudza Mutengo weMagetsi neMutengo Webasa reMagetsi Chekuchaja Mota uye Nzvimbo Dzinotsiviwa" (Su Shigong [2014 ] Nha. 69) uye neMahofisi eMutengo weMasipala Chiziviso cheZvinhu Zvakanangana NeMutengo weMotokari Yemagetsi Yekuchaja uye Yekutsiva Zvivakwa neMasevhisi (Ning Lian Gong  Nha. 87) inotaura kuti nyaya dzakanangana nekugadziriswa kwechaji yekuchaja yekuchaja uye kutsiva mota dzemagetsi muguta redu zvinotevera:
Kutanga, gadzirisa mwero wepamusoro-soro wekuchaja bhazi yemagetsi yakachena (12m) kuchaja uye kushandura sevhisi, chiyero chepamusoro-soro chemotokari dzemagetsi dzakachena (zvinomwe kana zvishoma), kukwira 0,12 yuan pa kWh, 0.16 yuan pamakiromita, 0,12 yuan pa kWh. Yakagadziriswa yakachena yemagetsi bhazi (12m) kuchaja uye nekuchinja sevhisi yakakwira yekuchaja mwero, yakachena mota yemagetsi (manomwe kana mashoma) kuchaja sevhisi yepamusoro yekuchaja chiyero che1.46 yuan pa kWh, 2.00 yuan pamakiromita, 1.68 yuan pa kWh.
Chechipiri, yakachena mota yemagetsi (manomwe kana mashoma) simba rekutsinhana sevhisi yepamusoro haina kugadziridzwa, ichiri 0,68 yuan pamakiromita.
3. Ichi chiziviso chichaitwa kubva muna Chikunguru 10, 2018.